Dagaal beeleed markale ka qarxay deegaanka Deefow ee Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal beeleed markale ka qarxay deegaanka Deefow ee Hiiraan
15th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Dagaal beeleed mark kale ka dhacay deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan ayaa dhaliyey khasaare xoog leh. Taliyaha saldhigga booliska ee degmada Baledweyne, Korneyl Cali Cabdi Mahad-Alle (Cali Dhuux) ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dagaalka.
Ilaa 9 qof ayaa ku dhimatay 19 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed saakay mar kale ka dhacay deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan.
Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ilaa 6 ka mid ah dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa loo qaaday Mqudisho, sida uu xaqiijiyey maamulka Isbitaalka Baledweyne.
Qaar ka tirsan dadka deegaanka ayaa qaxay, kadib markii qeybo ka tirsan deegaanka lagubay, waxaa sidoo kale la gubay guryo fara badan oo lahaayeen dadka deegaanka lagu dagaallamaya.
Qaar ka tirsan odayaasha gobolka Hiiraan ayaa maalmahan waday dadaallo lagu joojinayo dagaal beeleed ka dhacay deegaannada Deefow, Kabxanleey, iyo Beereey oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Todobaadkii hore ayaa dagaalkani ka dhxe qarxay labo beelood oo wada dega gobolka Hiiraan, waxaana markaas kadib lagu heshiiyey in halkaas la geeyo ciidamo ka socda AMISOM si ay xaaladda u qaboojiyaan, hase ahaatee ma suuragelin, iyadoo dagaalku dib u cusboonaaday.
Madaxweynaha Mareykanka oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee Soomaaliya
MPs welcome new Minister of National Security